काभ्रेमा आफ्नै बाबुको ग’र्भ बोकेर छोरीले जन्माइन छोरा ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/काभ्रेमा आफ्नै बाबुको ग’र्भ बोकेर छोरीले जन्माइन छोरा !
काभ्रेमा आफ्नै बाबुको ग’र्भ बोकेर छोरीले जन्माइन छोरा !
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । अविवाहित १७ बर्षिया छोरीले बच्चा जन्माएपछि आफ्नै बाबुको ग’र्भ बोकेको खुलासा भएको छ । बालिकाले शनिबार राति अस्पतालमा बालकलाई जन्म दिईन् । रामेछाप जिल्ला मन्थली घर भई बनेपा ७ मा डेरा गरी मजदुरी गरी बस्ने ४० बर्षिय गोकर्ण कामीले आफ्नै छोरीलाई गर्भ बोकाएको स्विकारेका छन् । उनी निर्माण क्षेत्रका मजदुर हुन् भने श्रीमती र छोरी होटल मजदुर हुन् ।न्युजअफ नेपालमा यो खबर छ ९ महिनासम्म गर्भ लुकाएर राख्न सफल भएकी छोरीले अस्पतालमा कारवाही नगर्ने भए मात्रै बताउने भने पछि प्रहरीले उनलाई कसैलाई केहि नहुने विश्वास दिलाएर बाबुको गर्भ भएको पत्ता लगाएको थियो । अबैद्य गर्भ बोकाई ज’र्बज’स्ति करणी गर्ने बाबु गोकर्णलाई प्रहरीले आईतबार विहान कोठाबाटै प’क्राउ गरेको छ ।
‘छोरी र बच्चा अस्पतालमा उपचारार्थ छन्, बाबु प्रहरी नियन्त्रणमा छन्’–इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरिक्षक योगेन्द्र तिमल्सिनाले भन्नुभयो–‘परिवारका अन्य सदस्यहरुको समेत ब्यवस्थापन गर्ने गरी प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ ।’शुक्रबार साँझ छोरीले पेट र ढाड दुख्यो अस्पताल जाउँ भने पछि परिवारले बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पताल पुर्‍यायो । तत्काल उनको पेटमा बच्चा भएको र सुत्केरी ब्यथा लागेको बताए पछि आमा छाँगाबाट खसे झै भईन । उनले पटक पटक छोरीलाई नियमित महिनावारी भएको नभएको सोधेको भए पनि उनले झुक्याउँदै आएकी थिईन् ।अस्पताल लैजान बाबु नै अघि सरेका थिए । प्रहरीले अनुसन्धान गरे पछि मात्रै उनको गर्भमा रहेको बच्चा बाबुको भएको पत्ता लागेको थियो । ‘मैले साउन देखि छोरीसँग नियमित सम्पर्क गर्दै आएको हुँ, पेटमा भएको बच्चा मेरै हो’–प्रहरीसँग बाबुले स्विकारेका छन् ।
बालिकाको आमाको पित्त थैली निकालिएको छ । ढाडको अप्रेसन गरिएको छ । आमा रोगि भए पछि बाबुले ज’र्बज’स्ति नियमित सम्पर्क गरिरहे पनि कसैलाई भन्न नसकेको बालिकाले बताएकी छिन् । उनिहरु एउटै कोठामा बस्छन् । ८ वर्षको छोरा र १३ वर्षको छोरी सँगै थिए । चार छोरी मध्ये उनि माईली हुन् । एउटी छोरीको रामेछापको मन्थलीमै विवाह भएको छ ।‘उसलाई प्रहरीले थुनेपछि हामीले देहत्याग गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन’–बालिकाको आमाले प्रहरीलाई बताईन । तत्काल प्रहरीले उनि सहित बच्चाहरुलाई ओरेक नेपाल मार्फत माईती नेपालको जिम्मा लगाएको छ । बालिकाको आमाको पिसिआर परिक्षण पछि मात्रै पठाईने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रवक्ता डिएस्पी कुमार विक्रम थापाले बताउनु भयो ।
शनिबार ७० कोरोना संक्रमित थपिए, काठमाडौंमा ३, पिसिआर परीक्षण घट्यो
चार जनामा कोरोना भेटिएपछि खोटाङको दिक्तेल बजार अनिश्चितकालका लागि बन्द
महिनावारी भएको बेला महिला कामदारलाइ तिनदिन बिदा सहित तलव दिने सरकारको तयारी
अविवाहित र एक्ला महिलाहरुलाई महिनैपिच्छे भत्ता !
१० दिन क्वारेन्टाइन बसेर घर पुगेका बाबुले छोराछोरी भेट्नै पाएनन्, मामाघर आएका १३ वर्षीय गौरव पनि सधैका लागि अस्ताए !